Accueil > Gazetin'ny nosy > Pôlitika: Matimaty foana ireo maty ny 9 febroary 2009
Pôlitika: Matimaty foana ireo maty ny 9 febroary 2009
Nifanaraka ny mpifandrafy ankehitriny satria samy may volon-tratra. Natomboka tamin’ny fihaonana miafina tany Paris izay nihaonan’i Andry Nirina Rajoelina sy ingahy Ravalomanana Marc izay tamin’ny taon-dasa 2017 iny. Tsy nisy nipika ny resaka nifanaovan’izy roalahy ireto fa ny filazana an-gazety nataon’ingahy Ravalomanana Marc tamin’ny volana janoary 2018 iny dia tsy nandà velively ny fihaonana nataon’izy roalahy ireo. Raha tonga teto Madagasikara koa ingahy Andry Nirina Rajoelina dia tsy nandà izany fihaonana izany koa ny tenany.
Raha miverina amin’ny tantara isika dia tantaram-pitiavana no niaingan’ny adin’ingahy Ravalomanana Marc sy ingahy Andry Nirina Rajoelina tamin’ny taona nitondran’ingahy Ravalomanana Marc teto Madagasikara ny taona 2001-2009. Nivadika raharaha pôlitika izany satria samy nilaza azy ho dadany ny roa tonta rehefa lany ben’ny tanànan’Antananarivo ingahy Andry Nirina Rjoelina ny taona 2007. Niafarany dia iny nifanongana tamin’ny taona 2009 iny. Tsy vitan’ny nifanongana fa niafara tamin’ny famonoan’olona nifanaovan’ny andaniny sy ny ankilany izany. Nanomboka tamin’ny raharaha antsoina hoe alatsianainy mainty izay nahafatesana olona tetsy Analakely tamin’ny alatsinainy faha 26 janoary 2009. Nisy nandory ny trano tao andamosin’ny “Arcade” tao Analakely. Olona maro no maty tamin’izany ary mbola tsy fantatra marina ny isany mazava hatramin’izao. Nifanilika andraikitra ingahy Marc Ravalomanana sy ingahy Andry Nirina Rajoelina tamin’iny fotoana iny rehefa nanomboka nahazo vahana ny fihetsiketsehana hanonganana an’ingahy Ravalomanana Marc. Nitohy tamin’ny fandoroana ny onjam-peo sy televizionina MBS izay an’ingahy Ravalomanana Marc sy ny RNM ary ny TVM izay fananan’ny fanjakana Malagasy ny faha 26 janoary 2009 ihany.
Tany Ambositra dia olona roa no maty notifirin’ny miaramila nalefan’ny fitondrana Ravalomanana Marc izay teo ambany fitarihin’ny lehiben’ny faritra Amoron’i Mania tamin’izany fotoana izany tao Atampon’i Vinany ny faha 04 martsa 2009. Nahatratra 08 no naratra tamin’izay fotoana izay. Ireto maty ireto dia olona nitaky ny fialan’ingahy Ravalomanana Marc tsy ho filoham-pirenena intsony noho ny fitantanany ratsy sy ny jadona nampiasainy teto Madagasikara ka nanomba an’ingahy Andry Nirina Rajoelina izay nitarika ny tolona tamin’izany fotoana izay izy ireo.
Nisy olona maty sy naratra ary nitondra faisana noho iny raharaha Ravalomanana Marc sy Andry Nirina Rajoelina iny tany amin’ny toerana maro.
Ny tena ngezabe indrindra tamin’ny raharaha ny fanonganana ny fanjakana jadona nentin’ingahy Ravalomanana Marc iny dia ny tifitra variraraka nataon’ny miaramilan’Ambohitsorohitra tamin’ireo vahoaka marobe izay namporisihin’ingahy Andry Nirina Rajoelina ho eny amin’ity lapam-panjakana ity. Vokatr’izany dia olona 36 no maty teo noho eo ary 100 mahery no naratra.
Taorian’izay dia rava ny fanjakan’ingahy Ravalomanana Marc ary lasa nandositra tany Afrika Atsimo izy ny faha 17 martsa 2009 rehefa nametra-pialana ka nanome izay ny miaramila, nefa nalain’ingahy Andry Nirina Rajoelina sy Norbert Lala Ratsirahonana amboletra ny fahefana tamin’izany.
Tsy nampaninona ny olona iny fakany ny fahefana iny satria nanantena fiovana teto amin’ny firenena ny Malagasy. Indrisy anefa fa mbola zava-doza indray no nitranga.
Potika tanteraka ny firenena Malagasy ankehitriny noho ny fitantanana tamin’ny tetezamita sy tamin’izao repoblika fahefatra izao. Manao didy jadona sy didi-ko fe lehibe ingahy Hery Rajaonarimampianina ankehitriny. Lasa nihavana tsy fidiny indray ingahy Ravalomanana Marc sy Andry Nirina Rajoelina ka nifampitantana hatrany amin’ny depiote Mapar (Miaraka amin’i Rajoelina) sy ny TIM (Tiako Madagasikara). Tsy fantatra izay hiafarany satria samy manana ny filazany ny roa tonta.
Nifanaraka tsy fidiny ny mpirafy noho ny fitiavan-tseza. Hadinon’ingahy Andry Nirina Rajoelina sy ny Mapar ary ny mpomba azy sy ingahy Ravalomanana Marc sy ny Tim sy ny mpomba azy ny ran’ireo Malagasy maty sy naratra tamin’ny taona 2009. Ny fitiavan-tseza no nanjaka tamin’ireto filoha roalahy nitondra an’i Madagasikara tamin’ny kisendrasendra ireto. Tsy nisy fijerena ny tombotsoam-bahoaka intsony. Ny depiote dia lasa saribakoly fotsiny sisa noho ny fitiavam-bola diso tafahoatra loatra.
Ankehitriny dia lasa adin’ingahy Ravalomanana Marc sy Andry Nirina Rajoelina ary Hery Rajaonarimampianina no misy eto Madagasikara. Fahantrana sy korontana pôlitika ary tsy fandriam-pahalemana nefa no nentin’izy telo lahy ireo, ary mbola mihevitra hitondra firenena izy ireo na dia efa tsy nahomby aza. Ny fanirian’ny Malagasy nefa dia mba olona vaovao sady madio ary tia tanindrazana sy matahotra an’Andriamanitra no hitondra manomboka ny taona 2018 ity fa tsy izy telo ireo intsony.